Maxaa Sababay In Arjun Kapoor Iyo Shraddha Kapoor Aysan Xayeysiin Wadajir Ah Ugu Sameynin Filimka Half Girlfriend - Hablaha Media Network
Maxaa Sababay In Arjun Kapoor Iyo Shraddha Kapoor Aysan Xayeysiin Wadajir Ah Ugu Sameynin Filimka Half Girlfriend
HMN:- Director Mohit Suri filimkiisa Half Girlfriend wuxuu la yimid hadal heyn wanaagsan marka laga cabir qaato heesihiisa tayada wanaagsan iyo goos gooska filimkaan oo laga helay.
Balse waxaa lala yaabay sababta hogaamiyaasha filimkaan Arjun Kapoor iyo Shraddha Kapoor aysan si wadajir ah xayeysiin ugu sameynin Half Girlfriend.
Maal mihii ugu dambeeyay Arjun Kapoor kaligiis ayaa Half Girlfriend xayeysiin u sameenayay waxaana la is weydiiyay waxa ku dhacay Shraddha.
Hadaba qof ka mid ah kooxda soo saarayaasha filimka Half Girlfriend ayaa shabakada Bollywood Hungama u xaqiijiyay in Shraddha Kapoor ay xanuunsan tahay sidoo kalena kasoo kabaneyso duray ama hargab.
Arjun Kapoor ayaa Shraddha kula taliyay inay nasiino dheeraad ah qaadato haatana isaga ayaa isku hawlaayo inuu kaligiis filimka Half Girlfriend xayeysiin balaaran u sameeyo saxaafadana si joogto ah ula fal galo.
Filimka Half Girlfriend waxaa daafaha caalamka laga daawan doonaa 19-ka May 2017 waana filim jaceyl ah oo siweyn loo wada sugaayo.